Banks load of masuuliyadda marka dukaamada cuntada waxaa loo isticmaalaa sida "laamo". Trading qasbay banker angera oo aan helin wax magdhow ah mid halis ku soo kordheen ama kharashka kordhay. Baananka ayaa xaq by laamaha bangiga noqon doonaa ammaan jidkaas. Waa maxay iyagu ma xuso waa in ay tahay wax ka yar ammaan u ah qof kasta oo kale marka laga reebo isu bangiyada. No shirkad kale waa sida, hadayana jirin bangiyada. xafiiska Bank waa ka fog ammaan badan dukaamada. Intaa waxaa dheer, dhac bangiga dhisay oo kaliya tiro yar oo ah canjeero total. War qoraal ah oo ka 2011 muujisay in dhac bangiga tiriyaa oo kaliya wax yar ka badan boqolkiiba shan dhac la galay dukaamada iyo baananka. Maalmahan waxaa kale oo caddaan ah taabato bangiyada sida ammaan maaraysay lacag caddaan ah in si dhab ah ay tahay wax aan macquul aheyn in ay sameeyaan xatooyo bangi.
The wax-u bankiga ICA ma aha bangiga dhab ah, oo aan marnaba noqon doonaa. Waxaa la mid ah dhigiisa Coop.
Waxay leeyihiin ma laamaha iyo "xaalado bangiga" ayaa la toogtay in kiiska ugu xumaa oo kaliya Internet ama telefoonka. Inkasta oo IKEA wuxu iska leeyahay ee loo yaqaan bangiyada. ICA iyo IKEA Labada sidoo kale soo saari kaararka deynta iyaga u gaar ah. Tusaale ahaan shirkadaha Swedish weyn u hesho awood badan hababka lacag bixinta. Macaamiisha waxaa mararka qaarkood ku dhowaad baryayaa inaad hesho lacag kaash ah oo ku filan, tusaale ahaan, counters Formica. Sidoo kale waa in aan lacag ka heli iyada oo aan kaar.
Arrintan ayaa waxaa loo yeedhi waa iska bangiyada halkaas, tusaale ahaan, shirkadaha caymiska iyo silsiladaha ganacsiga weyn hawgalaan sidii bangiyo bilowday ka dib markii xiisadda dhaqaale ee 90 marka warshadaha credit la banneeyey. damaanad bangiga Dawladdu waxay ka dibna wuxuu ahaa sidoo kale shirkadaha kuwan. seyladda Tani waxa ay ahayd in kale ka liberalizing ujeedada aan sax ahayn in la kordhiyo tartanka. Tartanka halkii xasiloonida dhaqaale iyo si. ICA iyo Coop card ee Labada hore lahayn caymiska deposit oo waxaa lala waxa loogu yeero bangiyada kaydka. Kaararka waxaa laga yaabaa in loo isticmaalo oo kaliya in dukaamada iyaga u gaar ah.
Waxaa jira qasaaro weyn in shirkadaha kale ee ka badan bangiyada siiyay oggalaansho ee bangiyada. inta badan waxay ka mid yihiin, haddii ay suuragal tahay, xitaa ka sii badan bangiyada listicmaalka listicmaalka. Marka aad si ka duwan waxaa advertising, waayo, bangiyada Internet, e cidkale aqoonsiga iyo bixinta biilasha internetka oo aad leedahay saamayn ku qalloocan yahay. Tusaale ahaan, farta sida "sahlan waxa uu noqon lahaa in laga takhaluso biilasha boosta" marka halkii ay tahay wax ku ool ah. Codsatay in kale ee nolol maalmeedka, waxa ay u muuqan yaabaa in sidan.
"Bal qiyaas sida sahlan waxa uu noqon lahaa inuu ka tago baabuurka guriga iyo ku socdaan in ay ka shaqeeyaan halkii"
(Waa wax fiican oo caafimaad leh si ay u shaqo tagaan laakiin waxaa hubaal ah oo aan si raaxo leh)
"Xusuusnow in aad ka fogaato mishinka raaxo marka aad suxuunta gacanta ku dhaqayso"
"Ha sidoo kale aad ka fogaato mashiinka dharka lagu dhaqo iyo dhaq ul a alwaax xamaamka"
Tani waa khalkhalgelinta a luqadaha iyo advertising-rate iyo kala duwanaansho ah oo khafiif ah afka soo horjeedda ee Orwell ee sheeko 1984. Si aad u sheegaan in qof wax ku ool ah oo ku haboon waa xanibayo iyo shaqayn karto.
Si buuxda gadaal. Isagoo ka hadlayay of e-IDs loo isticmaalo wax badan oo ku saabsan internetka sida ay yihiin kuwa la xiriira dambiyada halis ah. Tiro ka mid ah ganacsatada keentay ayaa bandhigi khiyaamo in malaayiin marka ay e-IDs ka Telia isticmaalo Hay'adda canshuuraha iyo shirkadaha qaarkood.
No arrinta sida fiican dad badan ay tahay xisaab bangi barskrapat dhamaadka bisha imanaya. Waxaad si fudud u badbaadin karo ugu yaraan wax yar oo lacag bil kasta, xataa kuwa la ballamay xun. Macna ma laha inta masaakiinta aad si iska waxaad ka dhigi kartaa $ 100 bil ah ilaa kayd ah oo ku saabsan tiro yar oo boqol oo doolar waa in la isticmaalo. Iyada oo kayd this uma baahna in la hubiyaa si joogto ah inta hadhay xisaabta. Badbaadinta rasiidhada iyo buug sahlan lacag caddaan ah haya, haddii aad dib u tegey. Dooro bangiga dhab ah oo ay leeyihiin kayd yar halkii joogto ah hubinta xisaab bangiga internetka ama rasiid ka ATM ah.
The bangiyada in ay u badan iska iyagu waa bangiyada nadiif Internet listicmaalka. dembiyada la xiriira ayaa wareeg ah ka dambiyada credit card saafi ah in ay dembiyo la xiriira bangiyada online. Laakiin waa sida caadiga ah ma in bangiga la kulmin dembi. Barnaamijyada xun loo yaqaan Trojans taxaddar la'aan ku soo dhex gelin karo kombiyuutarka user ee. Waxay ka shaqeeyaan ee asalka ah iyo soo diro sirta ah in server computer ah. baahida loo qabo Dambiyada kiiskan aan xitaa naftooda waxay khuseeyaan kaararka deynta been abuur ah. denbi wuxu u dhici karaa gebi ahaanba la isticmaalayo computer qalabaynta, laakiin waxa ay sidoo kale ka dhigan tahay in si fudud loo helo waxaa ka mid ah waa. Laakiin xataa haddii ay taasi ku jira goolhaye aadanaha si loo yaqaan kiiskan deeq uu account loogu isticmaalo dembiyada.
Waxaa inta badan waa dambiilayaal credit card oo marin on inuu sameeyo dembi bangiyada online. Tusaale ka mid ah qoriga ah waa Dhimashada A311 sidoo kale loo yaqaan Haxdoor. Trojans faafin by e-mail. Banking page login la xidhiidha qoriga waxaa si xirfad leh loo qaabeeyay in farqi ma u baahan tahay in lagu arko ka dhanka ah dhabta ah. Xaddi aad u balaaran oo lacag noqon karaa koontada la khiyaaneeyey in iibka ah ee wax soo saarka kasta oo ku saabsan internetka. Trojans waxaa lagu gadaa internetka oo noqon kara lacag lagu talo galay si ay ugu habboonaato bangi gaar ah. All afar bangiyada waaweyn ee Iswiidhan ayaa aad u saamaysay.
bangiga kaliya ee waa mid ka mid boqolkiiba boqol waa Riksbanken Swedish ah. On ay website waxaad ka akhrisan kartaa, si kastaba ha ahaatee laga yaabaa been ugu weyn in wixii la qoray by kasta oo Swedish State.
"Bank Qaranka wax awood uma laha lacag caddaan ah sida badan loo isticmaalo bulshada, laakiin waxa ay gacanta ku baahida dadweynaha."
Marka waa in bangiga bangiyada 'mas'uuliyadda qaadaan tallaabooyinka iyo nidaamyada si loo hubiyo in inta kale ee bangiyada iyo bulshada guud ogol yahay si loo ogaado inta ay le'eg tahay lacagta caddaanka ah aad rabto in aad isticmaasho. xaq u leeyihiin inay isticmaalaan lacagta caddaanka ah, sida laga soo xigtay Counsel Guud ee Bangiga Qaranka "ogolaanaya, halkii ay ka buuxda." Taas macnaheedu waxa weeye in tababar la fahmi karo Swedish soo socota. Marka ay dibadda dukaanka wuxuu leeyahay "lacag caddaan ah lahayn" sidaa iibsadaha ayaa galay kontantlöshet heshiis marka uu dukaanka. xaq u leeyihiin inay isticmaalaan lacagta caddaanka ah waa sidaas oo ficil ahaan si buuxda lamafilaan ah.
marka hore wuxuu lahaa oo kaliya Riksbanken ayaa mas'uul ka ah maaraynta lacagta caddaanka ah. In the 80s iyo 90s raaceen u habaynta iyo hufnaan (akhri doorin) oo waxyaabo kale keentay in la xiro xafiiska Guddoomiyaha ee. Muddo sanado ah qaar ka mid ah jiray shirkad for hawlaha diiradda saari doono faa'iidada iyo kharashka kaydka. Waxaa la odhan jiray Money ee Sweden (PSAB). Shirkadda noqday Buuqa dhaqaale oo la xiray hoos ku 2004. Markaasaa waxaa u timid nidaamka banneeyey hadda. Go'aanada ku saabsan nidaamka this banneeyey ayaa xididdadiisa Guddiga Fulinta. Riksbanken ayaa haatan lahaa oo kaliya tiro yar oo ay xogta hore kaas oo ay maamusho laba xafiis ee Tumba iyo Mölndal. Waxaa la go'aansaday in 2013 in ay u guuraan hawlgallada xafiiska hal Broby kan kaliya qaban raso. maamulka qadaadiic Full yimid in la maamulo shirkad gaar ah.
Sida waafaqsan Xeerka, Riksbanken waa in "kor loogu qaado lacagta amaan ah oo hufan oo masuul ka ah bixinta qoraalada euro iyo lacagta birta ah." Waa in aanu qaadan waxa ay macno ahaan waa in halkii Riksbanken qoray kitaabkan intii aan awooday in ay "ku jiifaan leexo ah." Waxaad la yaabi markii aan heli doono share siman bangiga ah ee gaarka loo leeyahay dhexe ee Sweden iyo Reserve Federaalka Maraykanka?
More ku saabsan labawejiilenimo iyo is burinaya Riksbanken ayaa
bangiyada dhexe kale oo aan ahayn Swedish leeyihiin waxbarashada ayaa muujiyay, in lacagta caddaanka ah waa mid ka mid ah siyaabaha ugu jaban ee lagu bixiyo shaqsiyaadka iyo ganacsatada labada. Waxa intaa dheer in khiyaamo elektarooniga ah waa in ka badan been abuur lacag caddaan ah. Ammaanka Gaadiidka Ururka yiraahdo (Security Transport Association Yurub) hore u muujiyeen dhowr sano ka hor lacag caddaan ah in ay ahayd habka ugu caansan oo ammaan ah lacagta Yurub. Yiraahdo ku amray baadhitaan uu si wax looga qabto bangiyada iyo shirkadaha credit card oo doonayay in ay ku soo rogaan total kontantlöshet. Waxa ay muujisay in kontantlöshet guud ka dhanka ah doonista dadkii dibadday u baxeen oo waxay dareemeen in naftooda dadka dooran kartaa sida ay doonayeen in ay bixiyaan.
Riksbanken ayaa doortay in ay diiradda saaraan badan oo ku saabsan kaabayaasha iyo technology halkii ilaalinta macaamiisha. ilaalinta Consumer ayaa halkii lagu wareejiyay FSA kontantlösfanatiska ah. Sidaa darteed Macaamiisha waxay leeyihiin ficil ahaan ma ilaalin marka la eego lacagta caddaanka ah. Waa sida haddii yeeyda oo la faray in ay ku qabsadaan danaha Red Riding Hood ee. Wolves ay leeyihiin oo keliya dano iyaga u gaar ah ku hay.
Waxaa jira laba sababood oo muhiim ah in la akhriyo website-ka Riksbanken ayaa. First, waxaad ku baran kartaa oo ku saabsan nidaamka lacagta by baarista xaqiiqada Gaarna Ujeedada iyo provable. Last, laakiin ma yaraan, mid si cad u arki kartaa sida Riksbanken ku kor fursadaha listicmaalka hore ee lacagta caddaanka ah. Halkan ka mid ah ka heli kartaa Munaafaqnimada ugu weyn ee taariikhda Swedish. A tusaale ahaan aad u muhiim ah waa in ay Riksbanken iyo nin kale ayaa go'aansatay inay xidho
kayd lacag caddaan ah. Ina keena aynu ku celinayaa hadal Riksbanken ayaa ka qaybta hore si loo caddeeyo bangiga ee munaafiqiinta "dhexdhexaadnimada".
On xukuumadda Isbahaysiga magacaabay Guddoomiyaha Stefan Ingves abbaaro soo jeediyay in eedeymaha ku soo bixid ATM yareeyo lahaa isticmaalka lacagta caddaanka ah ee Sweden. Sidee qoraal in si wadajir ah ula dhexdhexaadnimada ee kor ku xusan? Wuxuu muujisay in dhaqanka bangiyada 'ee dalalka kale ee nordigga kaliya ka qaadaan lacag bixitaanka a for soo bixid ATM ka ahayn macaamiisha iyaga u gaar ah ay hoos u isticmaalka lacagta caddaanka ah. Lahaanshaha in ay bixiyaan in ay ka baxaan in ay lacag u gaar ah waa aan macquul ahayn. Waxaa dabcan waa Ingves gabagabo qoraaga oo aan ahayn.
Ingves marar badan oo ay raalli ka hadlay haddii dhac CIT labanlaab dhowr sano laakiin fogaadaa sidoo kale xusay kuwa yaab gaari by credit iyo kaararka debit khiyaamo Internet. Ma dhexdhexaad ah? Riksbanken ayaa sanadihii la soo dhaafay la Yimaadeen ra'yiga aan macquul ahayn in lahaanshaha gaarka ah ee maamulka lacagta caddaanka ah ayaa loogu talagalay in "kicin tartan weyn iyo horumarinta wax soo saarka." fikirka noocan oo kale ah iska leh in bulshada ganacsatada iyo sinaba mid ka mid ah ugu hawlaha muhiimka ah ee aasaasiga ah bulshada. Waa in laga yaabo in matoorada dabka saldhigyada dab kala duwan si ay u ordaan qabsadaan in dababka ka, sidoo kale? Idaacadda ayaa markii ugu horeysay si lacag halka qaar kalena ay ka maqnaan doono lacag. matoorada dabka soco max ah.
"Baabiiyo ee lacag caddaan ah oo ku saabsan xaalada curdan tahay sharci lahaa laba faa'iidooyinka. First, sharciga fiican fikiri lahaa xaqiiqada. Xataa maanta muhiimad jira xorriyad in ay ka doodaan heshiisyada oo sidaas daraaddeed waxaa ficil ahaan waa maya waajib ku qabanaya inay aqbalaan lacag caddaan labaad sharciga mar dambe, by ay mugdiga, hortago ciyaartoyda suuqa si tartiib tartiib ah ula qabsan lahaa suuqa iyo in ay tayadoodii kharashka bixin. "
"In muddo dheer, waa macquul in ay lacag kaash ah xaaladda gaarka ah sida curdan tahay sharci ma jireyso."
"Mid ka mid ah khasaare cad xeer-dejintu for waajib ku qabanaya inay aqbalaan lacag caddaan ah waa in ay ku lug leedahay qufulka a in default lacag sida suuqa si tartiib ah u muuqataa in ay ku saabsan in ay ka tanaasulaan."
"Against asalka this, waxaan aaminsanahay in tallaabooyin si loo xoojiyo lacag caddaan ah xaaladda curdan tahay sharci ma naxa caddaynta ee nidaamka bixinta ammaan ah oo hufan."
End of xigashooyin.
nuuxnuuxsaday, waxaa la sameeyey by qoraaga si ay u xusaan ee Riksbanken ayaa muuqashadii cabsi shirkadda maalgelinta ama shaqaale kale oo kasta oo gaar ah in industry ee. Waxaad warqad u qori in sharci ay tahay in ay ka tarjumayaan dhabta ah.
xaqiiqadu waxa ay tahay in waxbarashada qaar ka mid ah ayaa muujiyay in sida ugu badan siddeed ka mid ah tobankii qof ee rabto habka maareynta lacag caddaan ah wuxuu kordhin doonaa. Cash Xaaladda qaanuun waa halkii la xoojiyo. Fikradda ah "suuqa" waa in xaaladaha oo dhan sida adag qabteen in saaxiibo khayaali ah kid ee fadhiya kursi madhan ee garoonka. Suuqa macquul ka dhigan tahay macaamiisha laakiin hadalka ka dhigan tahay, ku dhaqanka, shirkadaha doono.
Tan iyo markii inta badan doonayaan in maamulka lacag caddaan ah in la kordhiyo waa mid dhagaysan intooda badan. Laakiin waxa ay u muuqataa in ninka la "suuqa" halkii ay ka dhigan tahay ganacsi. bangiga dhexe waa in aanay noqon sida shirkadda gaarka loo leeyahay ah maaliyadda. bangiga dhexe waa in ay leeyihiin mas'uuliyad qoto dheer bulshada in ganacsatada gaarka ah marnaba ku noolaan karaan ilaa. Sidaa darteed, waa in aad isticmaalin af iska leh ganacsiga gaarka loo leeyahay. Noocan ah "qufulka-in" at aqbalo guud ee lacagta caddaanka ah waa waxa ugu wanaagsan in dhici karto nidaamka lacagta Swedish.
Waayo, aawadiis of kulan oo uu saftay siinayaa Bank uu leeyahay ikhtiyaarka ah in la siiyo lacag caddaan ah si sharci khasab ah. Laakiin si cad waxaad ka arki kartaa in qoraalka oo jidka u tiirsado. Cash Sharciyadda si fudud la suulin karin by habka of laga reebo, qandaraasyada iyo heshiisyada. Halkan waxaa ku qoran Riksbanken ah si loo ilaaliyo suuqa bixinta. Waxa intaa dheer in dhibaatooyin (ma aha in la isticmaalo) lacag caddaan ah waa in ay ahaadaan "sidaas u weyn oo sidaas saamayn
dad badan oo suuqa dilaacda '(si ay u sameeyaan wax ku saabsan).
Taas macnaheedu waxa weeye, ku dhaqanka, in aan isbarbar dhig ah, in haddii Russia oo weerar ku Sweden ayaa gobolka ugu yar xaq u lahayn in la difaacay maxaa yeelay waxa ay saamayn kuma dad ku filan. Society isku dayo inuu ku nasan la ilaalin habboon sida qowmiyadaha laga tirada badan yahay ka cunsuriyad sida. Tani waxay dhacdaa tusaale ahaan booliska iyo dadaallada kala duwan ee dowladda. Laakiin tani waxay khusaysaa
Waxaa cad in aan "laga tirada badan yahay lacag caddaan ah". Xaaladdan oo kale waa Riksbanken laftiisa sida "cunsuri" ama haddii aad rabto in ay kaliya taagan iyo dheygaga shisheeye u soo jeestay lagu hoobtay oo dhulkay ku soo dhici aan xitaa ugu yeeray booliska ama ambalaas.
Riksbanken laftiisa ayaa sheegay in abbaaro in aysan bixin ilaalinta macaamiisha iyo kooxaha nugul (marka la eego isticmaalka lacagta caddaanka ah). Kooxahani waxay si buuxda iska indho by bangiga talisnimo. Waxay sheegeen in ay wax yar uun in ay awoodaan in ay jiraan bixiso lacag caddaan ah ikhtiyaarka listicmaalka aan la heli karin. Inkasta oo ay iska hor imanayaan hore in ay jirto baahida dadweynaha in la xakameeyo cadadka lacag caddaan ah oo aan Riksbanken ah. Sidee baad u baahan tahay?
Wax doorasho shakhsiyeed, ma jiraan wax qol arinkii ka Riksbanken ayaa. Waa dheeraad ah oo ku saabsan kuwa aan xaq u leedahay inaad furatid xisaab bangi si aad u isticmaasho lacag caddaan ah lahayn. Against kuwan soo jeediyay tan iyo "tallaabooyin lala beegsaday". ruuxii dokumentiga waa in lacag caddaan ah waa "dhacsan" oo loogu talla galay horumarinta marka dhibaatada macquul halkii noqon waa ah oo ku saabsan doorasho listicmaalka waa talisnimo.
xigasho oo dheeraad ah
"Ciyaartoyda Market, oo ay ku jiraan qoysaska, waxay leeyihiin kharashka labada ay lacag caddaan ah iyo hababka kale ee lacag bixinta, oo sidaas daraaddeed waa inay si xor ah u sameeyaan go'aamada ganacsiga ku saabsan oo lacag habka ay u isticmaalaan iyaga u noqon."
"Marka laga eego dhinaca dhaqaalaha u muuqataa kaarka debit inay ka jaban tahay lacagta naqdiga badan yihiin 20 kr." (Ma jirto caddayn in uu yahay)
"In kasta oo cilmi Riksbanken ayaa u gaar ah oo muujinaysa in tirada dhaqdhaqaaqa lacagaha hoos u, waa ay adag tahay si loo xaqiijiyo in sida uu kiisku yahay."
Mid ka mid ah ayaa sheegay in ka dibna in qoysaska ay tahay in ay naftooda ay awoodaan in ay go'aan ka bixinta habka ay rabto in aad isticmaasho. Dhanka kale, hore
khilaaf in kooxaha qaarkood oo kaliya waa in ay xaq u leeyihiin in ay isticmaalaan lacagta caddaanka ah. Waa quruxsan badan oo dhan Riksbanken waa in go'aan waxa ganacsi. Markaasaa dadkii adeeca. Mabda'a la mid ah sida in dictatorships.
Qormada waxaa permeated leh erayada iyo fikradaha sida ganacsi, ka qaybgalayaasha suuqa, kharash-ool ah iyo technology-dhex-dhexaad ah. Ma dhawaaq ah la Xuso on gaarka ah iyo dimuqraadiyadda. Wakiil dadka Riksbanken ama "suuqa" ee haydh? Riksbanken ayaa tan iyo 1600s ah la xidhiidh dhow oo ay gacanta ku baarlamaanka. Tani waa siyaasad u gaar ah, waayo, Sweden. Dastuurka ayaa sheegay in dhammaan awoodda dadweynaha ee Sweden waa in buslahda dadka iyo baarlamaanka waa wakiilada ugu weyn ee dadka. In ka badan 150 sano, lacag kaash ah ayaa curdan tahay sharci. Inkasta oo ay qirsan tahay in ay u egtahay sidii aqlabiyad badan oo dadweynaha arkaa lacag caddaan ah sida xaq u tusaysa Riksbanken si cad kuwaas oo go'aan ka leeyahay.
Waxa kale oo jira maqaalka kale oo la akhrisan kartaa bogga internetka ee Riksbanken ayaa loo yaqaan 'Cash ama kaarka. Sidee waa in aan bixiyo? '. Waxaa sidoo kale qoray laba shaqaalaha Riksbanken ah. The hore u soo sheegnay Segendorf iyo Thomas Jansson. Tani ma aha sida ay muhiim u akhriyayso qoraalkan, waxaa si iskeed ah diiradda on kharashka. Laakiin qaar ka mid ah oo muhiim ah waxaa waa inuu ku yidhaahdo oo ku saabsan. Waxay qaadataa badan oo ka mid ah kaararka deynta ka badan lacag caddaan ah, isagoo sheegay in kaararka debit waa in la isticmaalaa ka badan fidin si loo yareeyo kharashka. Waxaa la soo jeediyay in ay qaataan "eedeeyay hufan iyo kharashka ku salaysan." Taas macnaheedu waxa weeye in la eego in erayada ganaax ku talinaya ajuurada on lacag naqdi ah. Riksbanken waxay ku talinaysaa buuxda lacagaha binta hufan si loo tixgeliyo kaararka axsaan iyo dacaayad ajuurada bixitaanka for ATM.
cilmi Sound muujinaysaa in lacag caddaan ah waa qaali. Kani waxa uu ahaa warshadaha ammaanka. Caqli Xujada awoodi doonaan in ay halkaas joogo. Laakiin waxa muhiim ah in tusaan Riksbanken ayaa search overwrought ah "Dhaqaalaha aan fiicnayn". Waxaa isku dayo si ay u muujiyaan la garaafyada iyo miisaska marinkii ah taas oo sheegtay in waxa ay bixisaa in ay isticmaalaan kaararka amaahda. Waxa uu in dhinacyada qaar ayaa sheegayay in 70 kr noqon lahaa xadka halkaas oo ay bixisaa in ay isticmaalaan kaararka amaahda. Riksbanken ayaa sidoo kale meelo kale sheegay in xadka this kaararka debit noqon lahaa at 20 kr, halka qiimaha u dhigma of credit ku noqon lahaa 450 kr.
Waxaa laga yaabaa in hab la mid ah loo isticmaalo in siyaasadda aad u? Qof kasta oo ku muteystay in ka badan 500,000 kr cashuurta ka hor waa in ay codeeyaan for "Dick kaligii taliye". Kuwa kasban ka badan qadarka this codeeyo waa in for "Ra'iisal Wasaaraha Sture". "Dick kaligii taliye" had iyo jeer waa doorasho xun, iyadoo aan loo eegin dhaqaalaha. Kontantlöshet had iyo jeer waa ka duwan a lousy.
Waxaa la soo bandhigay in lacag caddaan ah iyo xisaabta ku salaysan labada (akhri listicmaalka) lacagaha leeyihiin dhaqaale miisaaman. In la eego dhaqaalaha la sifaynayo, waxaa jira diidmo lahayn in ay dalab in. Inta badan bulshada waxaa ka jaban sidii xaddiga korodhka. Dhibaatadu waxay tahay in iyadoo la yareynayo lacag caddaan ah si ay u kala ooday xanuunka saaray dhaqaalaha baaxadda ay. Ka hadalka ku saabsan lacag caddaan ah in qaali ah waa cadaalad darro in macnaha guud. Hadduu lacag caddaan ah kala badh, lacagta listicmaalka qeybtii lahaa is barbardhig ku habboon laga yaabaa in lagu sameeyo.
In dalalka kale sida Hungary, halkaas oo loo isticmaalo lacag kaash badan sida uu yahay kharashka ku baxa lacag celcelis ahaan waa mid aad u yar. Waxaa la barbar dhigi karaa baabuurta. waxaa doono
masaafada ah si weyn sare haddii aad kaliya eryi 50 mil la gaari sanadkiiba, iyadoo 1,000 mil marka la barbar dhigo. Cash weli waa jaban. Laakiin waa siyaasiyiinta, bangiyada, shirkadaha credit card, booliska, dukaamo iyo dad badan oo la khiyaaneeyey caadiga ah kuwaas oo ka dhigay lacag caddaan ah tartan u diiday sababtoo ah waxa kuwanu isku daro ka dhigay koritaanka credit card.
The markaas Guddoomiyaha Ingves ayaa muujiyay in xaaladaha opinion kale in lacag dhan waa dhali kharashka iyaga u gaar ah. Way fududahay in la yidhaahdo marka aad ku laayay habka maareynta lacag caddaan ah si ay guul darro dhaqaale miisaaman iyo saamiga kharashka joogtada ah sidaas darteed si xoog leh u kordhay. Waxa uu ku howl-gasha banneeyey maaraysay cusub ee gaarka loo leeyahay lacag caddaan ah si ay bangiyada ka hor si aan macquul ahayn uga faa'iidaystay maamulka dawladda lacag caddaan ah kaliya ee ujeedada laga fogaado dulsaarka habeen. bangiyada, ku dhaqanka, ma bixiso adeega ay bixiyeen.
Waxaa jira befog dhaleeceyn, laakiin mid ka mid ah sawiri karaa oo kaliya laba gunaanad. The bangiyada gaarka loo leeyahay ay ahaayeen heer sare darro, kuwaas oo loo isticmaalo habka ay u max ah. Riksbanken The ma uu samayn ku filan oo ku saabsan xaalada sababtoo ah karti, irresponsibility iyo colnimadiinna. Wax walba oo si cad u muujinaysaa in dhammaan noocyada kala duwan ee bangiyada (oo ay ku jiraan Riksbanken) ayaa hoos u dhigi lahaa lacagta. The bangiyada gaarka loo leeyahay ka dibna ay hasyo gobolka hore ee isticmaalka xad-dhaafka ah ee maamulka lacagta caddaanka ah. Waa sabab weyn u sheegtay in lacagta aan la waday kharashka u gaar ah. Ma aha Korkiinna Dhib baananka.
Ma jiraan wax muujinaya in bangiyada si lama filaan ah u joojiyaan lahaa iyadoo la isticmaalayo nidaamka siyaabo kala duwan ikhtiyaarka listicmaalka ah. waxba No. Waa in sidoo kale Riksbanken fahmaan. The isticmaalka xad-dhaafka hore ee maaraynta lacagta caddaanka ah ayaa muujinaya in mid ka mid kuma tiirsanaan karto bangiyada gaarka loo leeyahay in ay qaataan masuuliyada. wiilasha badan oo ku koraan kuwa labka dadka waaweyn ay mas'uul ka. Banks marna waa dadka waaweyn. Waxay marnaba joojin kabacdi ka weel cookie yihiin.
In warqad la iibiyay sheegay in bixinta kaarka qaadataa celcelis ahaan 25 ilbidhiqsi si ay u dhamaystiraan halka Chris Smalling ayaa lacag kaash ah ku qaadataa 26 ilbiriqsi. Waa maxay macnaha arrinta labaad? Waa maxay nooca doodaha doqonimo? Haddii ganacsiga dhamaado PIFFLE inay qiimo ah
wax soo saarka si ay 995 halkii 1000 karoon macquul ah si ay u badbaadiyaa waqti badan Hadda ilbiriqsi si oerhärt muhiim ah. Caddadka weyn qaadataa waqti dheer si ay lacag caddaan ah waa dabcan arrin dabcan sida biilasha dheeraad ah si loo tiriyo. Waa wax fiican marka heshiiska ma yeelan doonaan tiro yar.
Tani "badiyay ilbiriqsi" shaki la'aan waa dood ugu doqon kontantlöshet aan la kulmeen inta lagu jiro shaqada on buugga. Tan waxaa si dhow ula raacay by bayaanka in lix cents halkii boqol lumay ay sabab u tahay skimming ee ATM. Ma jiraa mar dambe wax badan ayaan boggles sida muran xun kontantlösheten haysaan? Haddii qofku qaato lacag via ATM maalin kasta oo sannadka ah si khasaaraha teori ah 22 karoon ay sabab u tahay skimming. Tan iyo daryeelka kontantlösheten wax badan oo ku saabsan beesadood ah, tani waa natiijada badan oo sax ah 21,90. Oh sida ay muhiimka u tahay in ay "biibiile waa madaxdii muusikaystayaasha" iyo "Marka Muhiim labaad".
Ha halkii i kuu sheegi ku saabsan wakhtigii ay dhab ahaantii muhiim. Sida laga soo xigtay restaurateur Stockholm ee Bengt Sörås ay qaadato in uu warshadaha 35- 40 ilbiriqsi si aad ugu bixiso kaadhka sida lacag kaash ah qaadataa toban ilbiriqsi. si kastaba ha ahaatee waxaa jira farqi weyn. safafka ayaa sida laga soo xigtay lahaa in aan isaga ahaan dhowr boqol oo mitir oo haddii qof walba ku bixin lahaa kaar. Makhaayadood badan iyo sida magaalooyinka waa weyn aqbalaan lacag caddaan ah oo kaliya.
The hore u soo sheegnay 22 (xumahay 21,90) taaj la celcelis 8,000 oo in faa'iido saafi ah in bangiyada noo fleecing sanad walba qofkiiba, ama idiina weyn ay u helaan on credit card marka la barbar dhigo. Sidee baan u jeclaan lahaa inaad dib ugu noqon karaa waqti sidaas weli waxaan lahaa in ay bixiyaan baqshadda lacag caddaan ah ee gacanta. Markaas ayaan xitaa haysan lahaa xisaab bangi laakiin wax walba "ka yar furaashka". In seenyadan riyo nostalgic, shirkadaha waa sidaas oo kale sameeyaan. Just leeyihiin lacagta ay ammaan u gaar ah. Waxaa laga yaabaa in qarin lacagta xamaamka waalidkeed sida Bert Karlsson sameeyey waqti dheer ka hor. Natiijada tani waxay noqon lahayd in ay jiri doonto bangiyada lahayn.
Waa maxay fikirka cajiib xoraynayaa. Ka dib markii mucjisadan nafsi fool, waxaan hadda dib ugu mawduuca.
Maxaad ula jeeddaan by labaad in sheegnay? Degdegin hoos dhowr khasnaji, gebi ahaanba? shaqaalaha ha at counters ka shaqeeya xawaaraha midigta iyo degdegin in la dilaa. Jooji hadalka ku saabsan seconds. Hindisaha ayaa u dhigay qiimaha direyska si loo dardar lacagta naqdiga ee waa mid fudud sida kacaan. caanaha A ay kaga bixi laheyd toban taaj siman oo aan 9,90. Laba headphones ku kici doonto 300 oo siman oo aan 295. Taasina waxay sidoo kale waa in qaar ka mid ah wretches in dhinta ganacsiga ee lama filaan ah markii sida isbedel xagjirka ah waxaa laga yaabaa in aad u dhiirran. Rajaynaynaa in lahjadda kajan ah uu ahaa cad qoraalka. Waxaa laga yaabaa in marka lacagta naqdiga garaaco dhowr ilbiriqsi listicmaalka kaliya sabab in.
Mid ka mid ah wax aad inta badan ma ogsoona in ay ganacsiga waxaa waajib sharci ah si uu u hubiyo dhowr wax ku saabsan xaq u yeelashada iyo ansaxnimada heshiiska waxiibsashada by credit card. Kaarku wuxuu u muuqataa in la hubiyaa hologram iyo logo. Saxiixa Macaamilka iyo waqtiga kaarka in la hubiyaa. Yaa ku dhaqanka gacanta ku kuwanu? Intaa waxaa dheer, aqoonsiga kasta oo hubiyaa. Cash marnaba u baahan tahay aqoonsi iyo waxay suurtagal ma ah in Abuuran yihiin.
Haddii checkings sharci ahaan loo baahan scrupulously raaceen iibka credit card baaba'aa meesha labaad sida flash a iyo bedelay dhowr il biriqsi ah ee soo gaartay in lagu xisaabiyo kaararka khasaaro. Sharcigu waxa uu inta badan u baahan tahay wax ku dhaqanka aan la raacin. Laakiin kaliya koror yar ee gacanta ku dhigi lahaa credit card iibsadaan ahayd badan gaabis ah ka badan lacag caddaan ah iibsadaan.
Markaas, sida la sheegay warqad ah in lacag caddaan ah loo isticmaalo in ilaa xad sare. Iyada oo qoraal ah giijisan on marinnadii iyo waqtiga KMG garaaf xisaabeed "cadeeyay" in ay arrintu sidaa tahay. Waxaa ilaa iyo haatan u dhaco sida ay u sheegaan in kharashka si buuxda ay go'aamiyeen waqti ay qaadato in lagu bixiyo. Xisaabaha ayaa waxaa si adag barbaro soohdinta on paranormal ama magaabo-diimeed. Mid ka mid ah ma Niinasaa kara oo ku filan oo ku saabsan warshadaha ammaanka xaqiijiyay in lacagta naqdiga raqiisan. Laakiin ha ciyaarta ku hay in ay sheegayaan in xaq Riksbanken ayaa. Taasi waxaa raqiisan inaad bixiso kaarka deynta ka badan qiimaha gaar ah.
Maxaad macaamiisha ka faa'iideysan ka? Waxaa la rumeysan yahay in makhaayadaha bedeli lahaa bedeley ay saboolnimo ah? Ma rabtaa matoorada raashinka bedesho qiimaha ay ku yar? Ma aha xitaa Riksbanken si fiican u sameeyo wax si doqonimo. Xaqiiqda halkii badanaa waa in tallaabooyinka halkaas oo lacag badan waa qayb aanay bixin saamayn appreciable ama saamayn kuma yeelan karaa oo dhan. Tax jeexan tusaale ahaan. Shirkadaha idinku mahad mahadsanid dibna macaamiisha heli jirin farqi weyn. Waa in mid ka mid ah iibiso xoriyadiisa mustaqbalka ee isticmaalaya kaararka deynta si loo badbaadiyo hal ama laba senti maalintii, taas oo ku dhaqanka waa male dhaqaale?
Dhamaadka this maqaalka labaad muujinaysaa Riksbanken run ahaantii uu PHIZ talisnimo. Waxaa la soo jeediyay in "bandhigo canshuurta on lacag sida dhimis on hab kale oo lacag bixinta." Sida loo fahmi karaa macnaha guud ka ah, taas macnaheedu waa in dhaqanka in ay ka qaadaan lacag caddaan ah iyo kaabaan doorasho listicmaalka la ilaha dhaqaalaha ay heleen in ugu horeysey ee uu. Just ka hor jeedin-tani waa hab lagu xakameeyo isticmaalka lacagta caddaanka ah oo waxa uu sheegayaa in aanad samayn. Haddii Riksbanken noqon lahaa sidii dhexdhexaad ah sida ay sheegtay in uu si buuxda u joogi lahaa baxay doodda ku saabsan isticmaalka kaarka lacag caddaan ah ama credit.
Waxa kale oo ay soo jeedinaysaa "saamaynta khiyaano ku saabsan hab dhaqanka" (Nudging eng.) In lagu xisaabiyo kaararka raallinimo. Tani waa wax la jahawareerinta saafi ah. Waa in sida oo dhan waa la soo jeediyay ee dimuqraadiyadda ah ee loo yaqaan? Waa in dalka Iswiidan ku xadey gelin sort qaar ka mid ah "xerada credit card" sida ay taasi dhacdo la habraaca guud inay Itobiya ee dictatorships? dadka Sweden ayaa sheegay in xaq u leeyahay inuu xakameeyo cadadka lacagta caddaanka ah ee bulshada waa in aan waxba xaqiiqda ka badan si aynu isu la xadey by Riksbanken ah.
Tani, aan aad u jeclahay Guddoomiyaha ma lahan doorasho gaar ah ama go'aan iyaga u gaar ah si ay u sameeyaan. Bank National faantaa on its "saadaasha sax ah." Waa in aan xitaa waxaa loogu yeedhi saadaasha maxaa yeelay, wax kasta waxay ku salaysan tahay Riksbanken iyo heesanaa listicmaalka feedhkii bir ah xakameeyo horumarinta jihada listicmaalka. Waa waxtar lahayn si ay u sameeyaan "saadaasha" gaarayaa khalkhalgelinta sheer dadweynaha. Labadan waraaqo ahaa oo kale caws buu la soo dhaafay. Waxaan halkan ka caddaynayaa dimuqraadiyadda Sweden oo rasmi ah isagoo dhintay. talisnimada Riksbanken waa inay ahaato mid muwaadiniinta cad ogaan meeshoodii.
torsdag 9 april 2020 06:15
Be att Roland får trygghet i sitt inre att Jesus än en gång ger honom sin Heliga kärlek. Amen